Sida loo Nakhshadeeyo, loo qoro, loona daabaco Ebook-kaaga adoo adeegsanaya Google Docs | Martech Zone
Sabtida, Janaayo 9, 2021 Sabtida, Janaayo 9, 2021 Douglas Karr
Haddii aad tagtay wadada qorista iyo daabacaadda ebook, waad ogtahay inaad ku jahwareersan tahay noocyada faylka ee 'EPUB', beddelaadyada, qaabeynta iyo qaybinta ma aha kuwa qalbi jilicsan. Waxaa jira tiro ka mid ah xalalka ebook ee halkaa ka jira kuwaas oo kaa caawin doona habka aadna u hesho buuggaaga buugaagta Google Play Books, Kindle iyo qalab kale.
Ebooks waa hab wanaagsan oo shirkaduhu u dejiyaan awooddooda booskooda iyo hab fiican oo ay ku soo qabtaan macluumaadka rajada ee bogagga soo degida. Buugaagta Ebooks waxay bixiyaan macluumaad qoto dheer oo ka badan warqad cad oo fudud ama muuqaalka guud ee muuqaalka muuqaalka. Qoritaanka ebook ayaa sidoo kale furaysa dhagaystayaal gebi ahaanba cusub iyada oo loo marayo marinnada qaybinta eBook ee Google, Amazon iyo Apple.
Waxaa jira tiro go'aan qaadayaal ah oo halkaas jooga oo raadinaya mowduucyo laxiriira warshadahaaga iyo akhrinta buugaagta laxiriira. Tartamayaashaadi ma joogaan? Waxaa jira fursad wanaagsan oo aad kuheli karto niche fiican iyo mawduuc aad daabici karto oo cid kale aysan wali helin.
Tan ugu wanaagsan, maahan inaad kireysato naqshadeynta ebook, suuqgeynta, iyo adeegga dhiirrigelinta… kaliya waad furi kartaa Doc cusub isticmaal Goobta Shaqada Google xisaabi oo bilow inaad naqshadeyso, qorto, oo aad dhoofiso feylka lagama maarmaanka ah ee aad u baahan tahay inaad ku daabacdo ebook-gaaga mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee qaybinta khadka tooska ah.
Talaabooyinka Lagu Daabacayo Ebook-kaaga
Ma aaminsani in farqi weyn u dhexeeyo istiraatiijiyadda qorista ebook maadaama buug kasta oo kale… tallaabooyinku isku mid yihiin. Buugaagta elektaroonigga ahi waxay noqon karaan kuwa gaagaaban, bartilmaameed badan, oo bixiya hadaf cayiman oo ka duwan buuggaaga caadiga ah ama buuggaaga kale. Waxaad ubaahantahay inaad diirada saarto nashqadeyntaada, abaabulka waxyaabaha aad ka kooban tahay, iyo awooda ay ugu dhiirogelin karto akhristahaaga inuu qaado talaabada xigta.
Qorshee buuggaaga - abaabul mawduucyo muhiim ah iyo mawduucyo hoose si dabiici ah si aad ugu hagto akhristahaaga maaddada. Shakhsiyan, waxaan tan ku sameeyay buuggayga anigoo sawiraya jaantuska lafaha.
Qorshee qoraalkaaga - Qeybinta joogtada ah, hadalka, iyo aragtida (qofka koowaad, labaad, ama saddexaad).
Qor qoraalkaaga - qorshee waqtiga iyo himilooyinka sida aad u dhammaystiri doonto qoraalkaaga koowaad ee buuggaaga.
Hubi naxwahaaga iyo higgaadintaada - kahor intaadan qaybin ama daabicin hal ebook, isticmaal tafatire weyn ama adeeg sida Grammarly si loo aqoonsado loona saxo wixii khaladaad higaada ama naxwaha ah.
Hel jawaab celin - uqeybso qabyo qoraalkaaga (heshiis aan daaha laga qaadin) ilaha lagu kalsoon yahay ee ka bixin kara jawaab celin ku saabsan qabyo qoraalka. Ku qaybinta Google Docs waa qumman yahay maxaa yeelay dadku waxay si toos ah ugu dari karaan faallooyinka is-dhexgalka.
Dib u eeg qoraalkaaga - adoo adeegsanaya jawaab celinta, dib u eeg qoraalkaaga.
Kordhi qoraalkaaga - Miyaad ku dari kartaa talooyin, ilo, ama tirakoob inta aad ku dhex jirto koobigaaga oo dhan?
Naqshadeynta daboolkaaga - codso kaaliyaha naqshadeeye naqshadeeye weyn oo abuuro dhowr nooc oo kala duwan. Weydii shabakadaada taas oo ah tan ugu adag.
Qiimee daabacaadaada - baaritaan ku samee ebook-yada kale ee adiga oo kale ah si aad u aragto inta ay iibinayaan Xitaa haddii aad u maleyneysay in qaybinta bilaashka ah ay tahay wadadaada aad tagto - iibinta waxay u keeni kartaa xaqiiqooyin dheeri ah.
Ururi markhaati - hel qaar ka mid ah saamileyaasha iyo khabiirada warshadaha kuwaas oo qori kara markhaati u ah ebook-kaaga - laga yaabee xitaa hor u qaad hoggaamiye. Markhaatifurradooda waxay ku dari doonaan kalsoonida ebookgaaga.
Abuur koontadaada qoraaga - hoosta waxaad ka heli doontaa bogag muhiim ah oo laga abuuro akoonnada qoraaga iyo bogagga shabakadda halka aad ku soo rogi karto ebook-kaaga oo aad iibin karto.
Duub hordhaca fiidiyowga - Abuur hordhac fiidiyow ah oo bixinaya aragti guud ee ebook-kaaga iyada oo laga filayo akhristayaasha.
Samee istiraatiijiyad suuqgeyn ah - cadee saamileyaasha, shabakadaha wararka, kuwa wax duuba, iyo sawir qaadeyaasha kuwaas oo jeclaan lahaa inay ku wareystaan ​​si aad u ogaatid wacyigaaga ebookga. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa rabto inaad dhigto xoogaa xayeysiis ah iyo qoraallo marti ah oo ku saabsan bilowgeeda.
Xulo hashtag - Abuur hashtag gaaban, soo jiidasho leh oo loogu talagalay dhiirrigelinta iyo wadaagista macluumaadka ku saabsan ebook-ka sanadka.
Xulo taariikhda bilaabida - haddii aad doorato taariikhda daahfurka oo aad kaxeyn karto iibinta taariikhdaas la bilaabay, waxaad ka heli kartaa ebook-kaaga illaa a ugu iibinta badan xaaladda ay ku soo kordhay soo degsashada.
Sii daa buugaaga ebook - sii daa buugga buugga oo sii wad kor u qaadista buugga wareysiyo, cusbooneysiinta warbaahinta bulshada, xayeysiin, khudbado, iwm.
La shaqee bulshadaada - u mahadnaq kuwa raacsan, dadka dib u eegay buuggaaga, oo sii wadaya ku celcelinta iyo kor u qaadista inta aad kari karto!
Talo Pro: Qaar ka mid ah qorayaasha cajiibka ah ee aan la kulmay badiyaa waxay leeyihiin dhacdo iyo qabanqaabiyaasha shirku waxay u iibsadaan nuqulo buugga kaqeybgalayaashooda halkii ay ka ahaan lahaayeen (ama marka lagu daro) bixinta iyaga si ay uga hadlaan munaasabadda. Tani waa hab fiican oo lagu kordhiyo qaybinta iyo iibinta ebook-kaaga!
Waa maxay Qaabka feylka ee EPUB?
Qodob muhiim u ah qaybinta buugaagtaada ebook ayaa qaabeynaya ebook-ka iyo awooddeeda ay ugu dhoofin karto si nadiif ah qaab caalami ah oo ay dukaamada buugaagta internetka oo dhami isticmaali karaan. EPUB waa halbeeggan.
Epub waa qaab XHTML ah oo adeegsada kordhinta faylka .epub. EPUB waa loo soo gaabiyay daabacaad elektaroonig ah. EPUB waxaa taageera inta badan akhristayaasha elektaroonigga ah, barnaamijyo la jaanqaada ayaa loo heli karaa inta badan taleefannada casriga ah, kiniiniyada, iyo kumbuyuutarrada. EPUB waa jaangooyo ay daabacday Madasha Daabacaada Dijital ah ee Caalamiga ah (IDPF) iyo Kooxda Daraasaadka Warshadaha Buuggu waxay ayidayaan EPUB 3 oo ah halbeegga keliya ee xulashada lagu soo koobayo waxyaabaha ku jira
Naqshadaynta Ebook-kaaga ee Google Docs
Isticmaalayaasha badanaa way furan yihiin Google Docs hana u isticmaalin awoodaha ku jira qaabeynta. Haddii aad qoreyso ebook, waa inaad.
Naqshad soo jiidasho leh cover ebook-kaaga bogga u gaarka ah.
U adeegso cinwaanka cinwaanka ebook-kaaga a Title Bogga.
U adeegso Cinwaannada iyo Lugaha cinwaanka ebook iyo lambarrada bogga.
Adeegso cunsurka Mawduuca 1 oo qor a ku kalsoonaanta boggeeda gaarka ah.
Adeegso cunsurka Mawduuca 1 oo qor qirasho boggeeda gaarka ah.
Adeegso cunsurka Mawduuca 1 oo qor a hore boggeeda gaarka ah.
U isticmaal cinwaanka Mawduuca 1 cinwaankaaga cinwaanada cutubka.
Isticmaal Table of Contents cunsur
Isticmaal Qoraalada element tixraacyada Hubso inaad fasax u haysato inaad dib u daabacdo wixii xigasho ama macluumaad kale ah ee aad dib u daabacayso.
Adeegso cunsurka Mawduuca 1 oo qor an About the Author boggeeda gaarka ah. Hubso inaad ku darto cinwaano kale oo aad qortay, xiriiriyeyaashaaga xiriirka bulshada, iyo sida dadku kula soo xiriiri karaan.
Hubso inaad geliso bogga jajab meeshii loo baahdo. Markaad hesho dukumiintigaaga oo raadinaya sida saxda ah ee aad u jeceshahay, u daabac PDF ahaan marka hore si aad u aragto inay u egtahay sida aad u jeclaan lahayd.
Google Docs EPUB Dhoofinta
Adiga oo adeegsanaya Google Docs, hadda waad qori kartaa, qaabeyn kartaa, kana daabici kartaa gabi ahaanba feylal qoraal ah ama dukumiinti si toos ah loogu geliyay Google Drive-kaaga. Oh - waana bilaash!
Waa tan Sida loo dhoofiyo Ebook-kaaga adoo adeegsanaya Google Docs
Qor Qoraalkaaga - Soo rar dukumenti kasta oo qoraal ku saleysan waxaa loo rogi karaa Google Docs. Xor ayaad u tahay inaad ku qorto buuggaaga Google Docs toos ah, soo dejiso ama u waafajiso Microsoft Word dukumiintiyada ama isticmaal ilo kale Google Drive ayaa awood u leh inuu socodsiiyo.
U dhoofi sida EPUB - Google Docs hadda waxay u fidisaa EPUB qaab feyl dhoofineed oo asal ah. Kaliya dooro Fayl> Soo Degso Sida, ka dibna Daabacaadda EPUB (.epub) oo waxaad diyaar u tahay inaad tagto!
Sifee EPUB-gaaga - Kahor intaadan daabicin epub-kaaga adeeg kasta, waxaad ubaahantahay inaad hubiso inuu sifiican loo qaabeeyey. Adeegso khadka tooska ah EPUB Ansixiyaha si loo hubiyo inaadan wax dhibaato ah qabin.
Halka Lagu Daabaco EPUB-kaaga
Hadda oo aad heshay faylkaaga EPUB, hadda waxaad u baahan tahay inaad ku daabacdo Ebook adeegyo dhowr ah. Meelaha ugu sareeya ee korsashada waa:
Daabacaadda Tooska ah ee Kindle - iskood u daabac buugaagta buugaagta iyo waraaqaha bilaashka ah ee Kindle Direct Publishing, isla markaana gaadho malaayiin akhristayaal ah Amazon.
Xidhiidhka Buugaagta Apple Books - halka keliya ee loo socdo dhammaan buugaagta aad jeceshahay, iyo kuwa aad ku dhowdahay.
Buuga Google Play - kaas oo ku dhex jira dukaanka ballaaran ee Google Play.
Smashwords - shirkadda adduunka ugu weyn ee loo qaybiyo buugaagta elektarooniga ah. Waxaan ka dhignaa mid deg deg ah, bilaash ah oo sahlan qoraaga ama daabacaha, meel kasta oo adduunka ah, inay ku daabacaan kuna qaybiyaan buugaagta dukaamada waaweyn iyo kumanaan maktabado ah.
Waxaan aad ugu talin lahaa in la duubo fiidiyoow si loo soo bandhigo buuggaaga, aan u dejiyo waxyaabaha laga filayo, isla markaana aan dadka u kaxeeyo si ay u soo dejiyaan ama u soo iibsadaan ebook-ka. Sidoo kale, ku abuur bio qoraa weyn adeeg kasta oo daabacan oo u oggolaanaya.
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa xiriiriyaha ku xiran Goobta Shaqada Google.
Tags: Amazonbuugaagta amazonandroidtufaaxabuugaagta tufaaxeBookeBuugaagEDaabacbeddelashada epubbeddelaha epubEpub ansixiyahajamhuuriyadGoogle DriveBuuga Google Playsida looBakhaarka iBooksroonaanliberodaabac ebookdaabac ebupxhtml
MakeWebBetter: Ku Dhis oo Ku Kobci Meheraddaada Ganacsi ee WooCommerce iyo Hubspot
WordPress: Cudarada MP3 Player ku dheji Qoraalkaaga Blog
Jul 24, 2014 markay tahay 4:24 PM
Post weyn, Thanx!
9, 2015 at 8: 17 PM
Buug ma ku sameyn karnaa google docs?
10, 2015 at 12: 07 AM
Waxaan aaminsanahay inay isku mid yihiin hadda, Maryam!
Jan 22, 2021 at 9: 55 AM
Tani waa mid aad u fiican. Kaliya wixii aan hadda u baahday.
Mar 20, 2021 at 4: 49 AM
Wayn Si cajiib leh ayay waxtar u leedahay. aad baad u mahadsantahay ?
May 25, 2021 at 7: 35 PM
Waxaan hayaa 300 bog oo leh sawirro yar bog kasta. Xaqiijinta baarka ayaa leh wax ka yar 12MB. Dukumintiyadayda muraayadaha indhaha ayaa aad u weynaan doonta Sideen u yaraadaa sawirada. Way goosteen laakiin sawir dhan ayaa jooga ..
Jun 2, 2021 at 12: 50 PM
Waxaa jira dhowr qalab oo khadka tooska ah ugajira si looyareeyo cabirka muuqaalka, laakiin badanaa waxay u yihiin wax soo saar tayo leh shaashadda… oo ah 72 dpi dhamaadka hoose. Qalabka cusub waa 300 + dpi. Haddii qof doonayo inuu daabaco ebook-kaaga, markaa 300dpi waa fiican yahay. Waxaan hubin lahaa in cabirka sawirkeygu uusan ka weyneyn cabirka dukumintiga (marka ha galin hana yareynin… ha ka dhigin meel ka baxsan ebook-kaaga, ka dibna ku dheji halkaas). Kadib ku cadaadi sawirka. Qalabka isdabamarinta sawirka ee aan isticmaalo ayaa ah Kraken.